Uyenza njani iWindows 7 Taskbar
IMicrosoft yenze utshintsho olukhulu kwiWindows 7 taskbar. Ikwenzile ukuba ukwazi ukwenza ngokwezifiso ukhetho oluninzi kunye noseto kwiWindows 7 taskbar. Ungahambisa ii icon apho ufuna khona, utshintshe indlela ibha yokuziphatha ngayo, yongeza iibar zesixhobo, kwaye ucofe nayiphi na i icon oyifunayo kuyo.
Ukuchama kunye nokuchama rhoqo
Ibha yomsebenzi iza kuqala ukulayishwa ngeempawu ezintathu ecaleni kweMenyu yokuQala: i-Intanethi Explorer, iWindows Explorer, kunye neMedia Player. Ukongeza ezinye iinkqubo kwibar yomsebenzi, tsala kwaye ulahle i icon yenkqubo ngokuthe ngqo kwibar yomsebenzi. Zonke ii-icon zebar yomsebenzi wakho ziyahanjiswa, ngoko zive ukhululekile ukuzilungisa kwakhona kuwo nawuphi na umyalelo owufunayo.
Unokucofa ekunene kwi icon kwiMenu yokuQala kwaye ukhethe iPin kwiTaskbar kwi-pop-up menu.
Ukwenza ulwenziwo ngakumbi, cofa ekunene kwindawo engenanto yebar yomsebenzi, kwaye ukhethe iiProperties. Ibar yomsebenzi kunye neefestile zeeMenu zokuqala ziyavela. Izinketho kule bhokisi yencoko yababini zikuvumela ulawule indlela ezisebenza ngayo i-Windows 7 ibar yomsebenzi.
Tshixa ibar yomsebenzi Oku kukugcina ekutshintsheni inkangeleko yayo, njengokuyenza
mde ukwenza indawo yeempawu ezingaphezulu. Qiniseka ukuba unezinto ngendlela
ufuna ngaphambi kokuba uyitshixe.
Fihla ngokuzenzekelayo i-Taskbar Oku kuyakwenza ibar yomsebenzi ngokuzenzekelayo zifihle
xa ungekho kufutshane nayo. (Khomba isikhombisi sakho emazantsi e
isikrini ukuze usibuyisele.)
Sebenzisa iiI icon ezincinci Oku kunciphisa ibar yomsebenzi kunye neempawu zayo ukuya kubude besiqingatha.
Indawo yomsebenzi kwi-Screen Khetha nayiphi na imiphetho emine yesikrini.
Amaqhosha ebar yomsebenzi Oku kuxelela windows ukuba iqela elifanayo windows phantsi kweqhosha elinye ukuya
khusela ibar yomsebenzi ekuxinaneni.
Indawo yesaziso Sebenzisa oku ukwenza isigqibo sokuba zeziphi ii icon ekufuneka zivele kwisaziso
indawo (ezantsi yiwotshi).
Jonga kuqala i-Desktop ngeAero Peek Cima okanye ucime amandla okwalatha kumtya kwi
ibar yomsebenzi kude ekunene ukubona phantsi kwazo zonke iifestile ezivuliweyo
Zive ukhululekile ukuzama ibar yomsebenzi de ibe ijongeka ilungile kuwe. Emva kokuba utshintshe ukhetho, jonga utshintsho ngokukhawuleza ngokunqakraza Faka iqhosha. Ngaba awuluthandi utshintsho? Guqula useto kwaye ucofe Faka isicelo kwakhona ukulungisa umonakalo.
Olunye ukhetho lwebar yomsebenzi alunakusebenza ukuba ibar yomsebenzi itshixiwe.
zide kangakanani iziphumo ebezingalindelekanga ze-letrozole
amayeza oxinzelelo lwegazi aqhelekileyo
iziphumo ebezingalindelekanga ze-yax